प्रवास Archives - Page 30 of 68 - Everest Awaj Everest Awaj
कोरोनाको दोस्रो लहरमा भारतमा ५९४ चिकित्सकको मृत्यु
भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर जारी छ। यसअघि, दैनिक ४ लाख नयाँ संक्रमित थपिँदै आएकोमा अहिले संक्रमण दरमा भने केही कमी आएको छ। तर, खतरा अझै टरेको छैन। कोरोना संक्रमणकैबीच न्युज एजेन्सी एएनआईले ‘इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन’लाई उद्धृत गर्दै दोस्रो लहरका क्रममा ५ सय ९४ जना चिकित्सकहरुले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरेको छ। रिपोर्टमा सबैभन्दा बढी मृत्यु राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको बताइएको छ। देशको राजधानी दिल्लीमा दोस्रो लहरमा १ सय ७ जना चिकित्सकहरुको मृत्यु भएको छ। दोस्रोमा बिहार रहेको छ। जहाँ, ९६… पुरा पढौ
अफगानिस्तानमा बम विस्फोट: ४ सर्वसाधारणको मृत्यु
अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा सेवा (एनडीएस) का सदस्यहरुलाई लक्षित गरी भएको विस्फोटमा ४ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। बम विस्फोटमा परेर अन्य ४ जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार परवान प्रान्तको चारिकार शहरमा उक्त घटना भएको थियो। उक्त घटनाको कुनै पनि समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। अफगानिस्तानमा पछिल्ला केही हप्तादेखि हिंसात्मक घटनाहरु तिब्र रुपमा बढ्दै गएको छ। यी आक्रमणबाट खासगरी अफगान सुरक्षाफौज र सर्वसाधारणको ज्यान गइरहेको मानव अधिकारवादीहरुले बताएका छन्। आगामी सेप्टेम्बर ११ भित्र अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी र नेटो सैनिक फिर्ती प्रक्रिया… पुरा पढौ
बेलायत सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेका एकजना वैज्ञानिकले बेलायत कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको पनि चपेटामा पर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले यससँग सम्बन्धित बेलायतमा पछिल्लो समयमा ३ हजार ३ सय ८३ जना यस्ता नयाँ संक्रमित भेटिएको भन्दै यस्तो अवस्था रहेको बताएका हुन्। तेस्रो लहर ल्याउन सक्ने प्रकारका बृटिस प्रजातिका नयाँ संक्रमितहरु थपिने क्रम जारी नै रहेकोले त्यस्तो अवस्था आएको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रवि गुप्ताले बताएका हुन्। उनले बेलायतको वर्तमान अवस्थाका बारेमा भनेका छन्, ‘हुन त हाल बेलायतमा देखा परिरहेका संक्रमितहरुको… पुरा पढौ
भारतमा देखिएका कोरोना भाइरसको नाम ‘कप्पा’ र ’डेल्टा’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरियन्टको नयाँ नामाकरण गरेको छ। कोरोना भाइरसका भेरियन्टहरुलाई जनाउनका लागि ग्रीक अक्षरहरुको प्रयोग गरेको हो। डब्लुएचओले अल्फाबेटका आधारमा संसारमा भेटिएका नयाँ भेरियन्टको नाम दिएको हो।भारतमा पहिलोपटक भेटिएको भाइरस बी १.६१७. २ भेरियन्टलाई ‘डेल्टा’ नाम दिइएको छ भने अर्को भेरियन्ट बी १.६१७.१ लाई ‘कप्पा’ नाम दिइएको छ। कोरोनाका यी भेरियन्टको पुष्टि सबैभन्दा पहिले गत अक्टोबरमा भारतमा भएको थियो। यसअघि, भारतीय भेरियन्ट भनेकोमा भारतले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। बेलायतमा पहिलोपटक भेटिएको कोरोना भाइरसको भेरियन्टलाई ‘अल्फा’, दक्षिण… पुरा पढौ
नेदरल्यान्ड्सले फुकायो भारतसँगको हवाई उडानमाथिको प्रतिबन्ध
नेदरल्यान्ड्सले भारतबाट हुने यात्रुबाहक हवाई उडान यही जुन १ देखि लागु हुनेगरी फुक्का गरेको छ। भारतमा कोभिड–१९ को महामारी व्यापक भएको भन्दै नेदरल्यान्ड्सले गत अप्रिल २६ देखि हवाई उडान बन्द गरेको थियो। तर कोरोनाभाइरसको महामारीको उच्च जोखिम रहेका मुलुकबाट युरोपतर्फ हुने उडानमाथि युरोपेली युनियनको प्रतिबन्ध भने यथावत छ। युरोपेली युनियनले कोभिडको उच्च जोखिम भएका मुलुकबाट गैरयुरोपेली नागरिकलाई युरोप प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। पुरा पढौ
कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरका कारण संकटमा परेको भारतमा पछिल्ला केही दिनदेखि संक्रमण दरमा कमी आएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा १ लाख २७ हजार ५ सय १० जनामा थप व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएसँगै देशभर हालसम्म कूल २ करोड ८१ लाख ७५ हजार ४४ व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। भारतमा हिँजो (मंगलबार) कोरोना संक्रमितको संख्या गत ५१ दिन यताको नै कम भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले मंगलबार जनाएको छ। भारतमा दैनिक मृत्यु दरमा हिजो केही कमी आएको छ। मन्त्रालयले… पुरा पढौ
सर्जियो अग्युरो बार्सिलोनामा अनुबन्ध
बार्सिलोनाले अर्जेन्टिनाका स्ट्राइकर सर्जियो अग्युरोलाई अनुबन्ध गरेको छ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले सोमबार अग्युरोलाई अनुबन्धित गरिएको जनाएको छ। बार्सिलोनाले ३२ वर्षीय अग्युरोलाई फ्री ट्रान्सफरमा अनुबन्ध गरेको हो। अग्युरोको आइतबार बार्सिलोनामा मेडिकल परीक्षण गरिएको थियो। अग्युरोले बार्सिलोनासँग दुई वर्षे सम्झौता गरेका ह्न्। उनी २०२३ सम्म बार्सिलोनामा रहने छन्। बार्सिलोनाले उनको रिलिज क्लज १०० मिलियन युरो राखेको छ। पुरा पढौ
ब्राजिलमा कोपा अमेरिका हुने
कोपा अमेरिका फुटबल ब्राजिलमा आयोजना हुने भएको छ। यसअघि कोपा अमेरिका अर्जेन्टिनामा आयोजना हुने तय थियो। दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च निकाय (कन्मेबोल) ले सोमबार कोपा अमेरिका ब्राजिलमा आयोजना हुने जनाएको हो। गत सिजन पनि कोपा अमेरिका ब्राजिलमा आयोजना भएको थियो। ब्राजिल साविकको विजेता टोली पनि हो। अर्जेन्टिनामा हुने भनिएको प्रतियोगिता कोरोना भाइरसको महामारीको कारण ब्राजिलमा हुने भएको हो। प्रतियोगिता जुन १३ देखि जुलाई १० सम्म हुने तालिका छ। यसअघि, कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कोपा अमेरिका फुटबल अर्जेन्टिनामा नहुने जनाइएको थियो।… पुरा पढौ
नेपाली फुटबल टोलीका सबैको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
यतिखेर, नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोली कुवेतमा छ। सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनोट अन्तरगत बाँकी खेलका लागि टोली कुवेतमा रहेको हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आइतबार राति कुवेत पुगेको हो। कुवेत पुगेलगत्तै नेपाली टोलीको कोरोना परीक्षण भएको थियो। नेपाली टोली र अफिसियल सबैको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको समाचार छ। नेपाली टोलीले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर विश्वकप छनोटको खेलहरुका लागि कुवेत पुगेको हो। विश्वकप छनोट अन्तर्गत नेपालको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना भने लगभग समाप्त भइसकेको… पुरा पढौ
नाइजेरियामा बन्दुकधारीले गरे १५० विद्यार्थी अपहरण
नाइजेरियामा एउटा इस्लामिक विद्यालयमा अध्ययनरत झण्डै १ सय ५० जना विद्यार्थी अपहरणमा परेका छन्। नाजेरियाली अधिकारीले बन्दुकधारीले विद्यार्थी अपहरण गरेको पुष्टि गरेका छन्। मोटरसाइकलमा आएका अपहणकारीले बन्दुक चलाउँदै मानिसलाई त्रसित बनाएर विद्यालयमा प्रवेश गरेको बताइएको छ। उनीहरुले अन्धाधुन्ध गोली चलाउने क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। विद्यालयमा ८ देखि १८ वर्षका विद्यार्थी थिए। नाइजेरियकाका उत्तरी राज्यहरुमा विद्यार्थी अपहरण बढ्दो छ। गत फेब्रुअरीमा एक वोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत झण्डै ३ सय किशोरीहरु अपहरणमा परेका थिए। ती मध्ये हाल धेरैजसो बन्धकमुक्त भइसकेका छन्। पुरा पढौ
नेपालीहरुको महान् सांस्कृतिक पर्व बडा दशैंको तपाईं सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना । दशैंको आज दसौं दिन । बिजया दशमी पर्व । १०.०२ बजेको शुभ साइतमा…
पोखरा । कास्की सामाजिक अभियान जापानको पहलमा विपन्न परिवारका लागि सहयोग समाग्री वितरण गरिएको छ । जापानमा अध्यन तथा रोजगनरी शिलशिलामा रहेका नेपाली युवाहरुले संकलन…
गोरखा । गोरखाको मलेओडार भिरमा बोलेर जीप दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते भएका छन् । गोरखा–बेनीघाट आरुघाट सडकखण्डमा पर्ने गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ मलेओडार भिरमा मंगलबार…
पोखरा । खुशी किनेर पाईन्छ ? शायद पाईदैन । तर खुशी किन्ने वहानामा वर्षेनी थुपै्र नेपाली युवाहरु विदेशिन्छन् । थुप्र्रै बाध्यताहरुले नेपाली युवालाई विदेशिन बाध्य…